Siemens na Bentley Systems na-eme ka njikọta njikọta ha na atụmatụ ntinye aka ha sie ike - Geofumadas
Siemens na Bentley Systems na-ewusi mmekọrịta ha na ha na ụlọ ọrụ achụmnta ego ọnụ
Ngwakọta ọhụụ ọhụrụ ahụ na-enye ihe ọmụma data ejikọta nke Teamcenter na Bentley iji mụbaa arụpụta osisi, mee ka mmezi ngwa ngwa ma belata ụgwọ.
Usoro ihe omimi nke njedebe na njedebe na-emepụta ejiri ihe di iche iche nke di n'usoro nke oma na usoro ihe di iche iche iji kpoo mgbagwoju anya ma kpoo ihe omuma nke umu osisi.
Siemens PLM Software mara ọkwa taa na Bentley Systems, ihe integrated ụlọ ọrụ na-enye ego oru ọzọ rụọ ọrụ nke ọma, na ijikọta Teamcenter® Pọtụfoliyo na ProjectWise na Bentley ejikọrọ data gburugburu ebe obibi (CDE) ngwọta. Teamcenter bụ management usoro ngwaahịa ndụ-okirikiri management (PLM) kasị eji na ụwa na bụ ProjectWise mmekota ikpo okwu maka oru ngo nnyefe 43 50 nke kasị mma imewe sịrị na Engineering News Record. Ihe ọhụrụ a na-aga n'ihu na njikọ Siemens na Bentley nke a mara ọkwa na 2016, ha ga-amụbawanye n'ụzọ dị iche iche na njikwa azụmahịa site na njikwa nke mmezi mmezi na iwu ụlọ ọrụ isi.
«Mgbe ị na-agagharị na teknụzụ dijitalụ, ọrụ ndị injinia na ndị na-ewu ụlọ na-esitekwu na ntọala dijitalụ na akụrụngwa dijitalụ gburugburu na n'ime ọrụ akụrụngwa ha,"
ka Greg Bentley, bụ onyeisi oche nke Bentley Systems kwuru.
"Ka anyị na - emeputa usoro ọrụ anyị, ọ bụ ihe ọ excitingụ nye anyị ka anyị na Siemens rụọ ọrụ iji mee ka iru ihe CDE dijital anyị na-arụ ọrụ karịrị ọrụ isi obodo. Site na ntinye nke Teamcenter PLM, njikọ nke ejima dijitalụ nke oru ngo ahụ nwere ike ịgbasawanye n'etiti ọnọdụ azụmahịa ha ma mee ka ihe ndị mepụtara dịkwuo ukwuu: na-aga n'ihu na akụrụngwa site na DNA dijitalụ! «
Ihe nhazi usoro ihe omumu na njikwa ihe di mkpa n'ime Teamcenter, na nkwekorita nke ndu nke ihe ndi a haziri, bu ndi Bentley CDE kwadoro ka ha jiri uru ejima di oru. Ụmụ ejima dijitalụ nke ọrụ ahụ na-emezi ngbanwe nke dijitalụ ma gbanwee mmekọrịta n'etiti sistemụ ọkọnọ nke ọrụ ahụ, na-eme ka nyocha na-aga n'ihu ma na-arụ ọrụ. Ntughari osisi site na nmalite oru ngo nwere ike ichota na ikesa ihe omuma na ihe di nma. Site na ijikọta kọflịnụ dijitalụ na ejiri eri dijitalụ, ụlọ ọrụ nwere ike belata ụgwọ ọrụ ịkwụ ụgwọ ọrụ ma zere ihe ndị na-eri, ma nwee ike melite akụkụ njikwa site n'ịba ụba nke osisi ma belata mmefu mmefu. Ugbu a, ụlọ ọrụ nwere ike ịmepụta ngwa ngwa na arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, mmezi usoro ihe omume na oru ngo iji meziwanye nnyefe nke ọrụ isi obodo, belata ọnụ ahịa ma meziwanye ihe oru ngo na-eme ihe mgbaru ọsọ.
Dịka ọmụmaatụ, na ọrụ ọrụ ike na ọrụ ọha na eze, dịka ọmụmaatụ, nyere ndị amụma ihu igwe ugbu a, ụlọ ọrụ ga-arụ ọrụ nke ọma ma bụrụ uru mgbe ha na-arụ ọrụ mmemme nnukwu ụlọ. Na omenala, ọrụ ndị a dị oke mgbagwoju anya ma dị oké ọnụ ahịa nwere ọtụtụ agbụrụ, na-enweghị nkà na ụlọ, na-arụ ọrụ n'adabereghị n'ịchụpụ ọrụ ahụ. N'ịgbasa Teamcenter site na nnyefe nke ọrụ ahụ, CDE na-enye ohere nhụta na ụda dijitalụ nke ụdị ejikọrọ na 2D na 3D, ejiri ike rụọ ọrụ iji gosipụta ọnọdụ nke ọrụ ahụ. Nke a na-enye ohere ịnweta ụbụrụ na-aga n'ihu na ntinye ihe ọmụma na injinia, iji nweta nlezianya na nyocha nyocha, dịka o kwesịrị ekwesị, site n'aka ndị otu n'ime ụlọ ọrụ na ịnye mpaghara. Ntinye aha nke ntinye akụrụngwa na nwube nke oru ngo ndi ozo n'ime uzo a na-enye ohere maka uzo di iche iche n'ime usoro oru ngo iji chebaa nsogbu nke uwa na ihe ngbadoro nke oma site na nghota nke ugbua nke mgbanwe ọ bụla. Ihe ngwọta ga-adị n'ahịa site na mmalite nke 2019.
«Ndị nwe / ndị ọrụ na injinịa, ịzụta na iwu ihe (EPC) ụlọ ọrụ dị mkpa iji belata akwụ ụgwọ ma nyefee ọrụ ndị ọzọ nke ọma, na ngwa ahịa dijitalụ ọhụrụ a na-eme ka usoro azụmaahịa dabere na data maka njikarịcha ọrụ na osisi »,
Tony kwuru. Hemmelgarn, CEO nke Siemens PLM Software.
"Site na teknụzụ ejima dijitalụ, ihe ngwọta a na-enye ohere data injinịa ka ọ na-agafe n'etiti ndị nwere ọrụ na isi obodo ahụ, ọ ga-ekwenyekwa ụdị ikpe dị iche iche nke ụlọ ọrụ."
Siemens PLM Software, a azụmahịa unit nke Siemens Digital Factory Division, bụ a na-eduga zuru ụwa ọnụ na-eweta nke software ngwọta ụgbọala na digital mgbanwe nke ụlọ ọrụ, na-eke ohere ọhụrụ maka Nsukka-aghọta ọhụrụ. Headquartered na Plano, Texas, na ndị ọzọ karịa 140,000 ahịa n'ụwa nile, Siemens PLM Software na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ niile nha ka gbanwee ụzọ echiche-adịkwa ndụ, ụzọ ngwaahịa na-arụpụtara na otú nke a na-eji ngwaahịa na akụ eme ihe ma ghọta ya. Maka ama ndi ozo gbasara Siemens PLM Ngwaahịa na ọrụ, gaa na www.siemens.com/plm.
Siemens AG (Berlin na Munich) bụ ikike nkà na ụzụ zuru ụwa ọnụ nke na-anọchite anya mma na injinia, ọhụrụ, mma, ntụkwasị obi na mba ụwa n'oge 170 afọ. Ụlọ ọrụ ahụ na-arụsi ọrụ ike n'ụwa nile, na-elekwasị anya na mpaghara nke ịmepụta aha, akpaaka na nyocha. Siemens bụ otu n'ime ndị na-emepụta nkà na ụzụ na nchekwa na akụ na ụzụ kachasị n'ụwa. Siemens bụ onye na - eduga n'ichepụta ọganihu dị ike na ikike nnyefe ikike na onye ọsụ ụzọ na ngwọta ngwá ọrụ, yana ngwa ngwa, ụgbọala na ngwọta ngwanrọ maka ụlọ ọrụ ahụ. Ụlọ ọrụ ahụ bụkwa onye na - enye ndị na - ahụ maka ngwa ngwa ntanetị ahụike, dị ka ụda ihe ndekọ na usoro mmepụta ihe nke magnet, na onye ndu na nchọpụta nchọpụta ụlọ, nakwa dịka IT. Na afọ nke afọ 2017, nke mechara 30 September 2017, Siemens mepụtara ego nke € 83.0 na ego efu nke € 6.2. Na njedebe nke September nke 2017, ụlọ ọrụ nwere gburugburu ndị ọrụ 377,000 n'ụwa nile. Enwetakwu ihe ọmụma dị n'Ịntanet www.siemens.com.
Bentley Systems bụ a zuru ụwa ọnụ ndú na-enye engineer, architects, geospatial ọkachamara, constructors, na nwe-rụọ na mbara ngwọta na-aga n'ihu na software imewe, ewu na akụrụngwa arụmọrụ. Bentley ọrụ na-uru nke agagharị nke ozi gafee ọzụzụ na ofụri ndụ okirikiri nke akụrụngwa oru ngo na ihe ala na-anapụta mma arụmọrụ. Bentley ngwọta na-agụnye ngwa MicroStation ọmụma ịme ngosi uwe, mmekota ọrụ nke ProjectWise napụta integrated oru na arụmọrụ ọrụ AssetWise imeta onye nwere ọgụgụ isi akụrụngwa, complemented mbara jisiri ọrụ awa site na ịga nke ọma atụmatụ omenala.
Ntọala na 1984, Bentley nwere ndị mmekọ 3.500 karịrị mba 50 ma na-aga n'ihu iji nweta ego ntinye ego nke $ 700. Kemgbe 2012, Bentley etinyewo ihe karịrị $ 1 ijeri nyocha, mmepe na ihe. www.bentley.com
Previous Post«Previous Ndị na-esochi onyinye afọ a
Next Post Akwụkwọ Ngwuputa Geo-Engineering 6 maka nbudata n'efuNext »